Izindaba - Ungayikhetha kanjani indwangu yezingubo zangaphandle?
Kunezinhlobo eziningi zezindwangu zezingubo zangaphandle. Yikuphi okulungele kakhulu kuwe?
Ekukhetheni izindwangu zangaphandle, kunemisebenzi eyisithupha ebalulekile. Ake sibheke izici eziyisithupha:
Izinga lokungena komoya lincike ebunzimeni bokujikeleza kwendwangu kwendwangu. Ukuvunyelwa komoya kubaluleke kakhulu kunoma yimuphi umsebenzi ongaphandle. Phakathi kwazo, okubaluleke kakhulu ikhava nesihlalo. Ezingxenyeni ezivaliwe nezembozo, izindwangu ezingangeni moya zingadala isikhutha. Okwesihlalo, isiguqo esiphefumulekayo sizoba ntofontofo, hhayi ukunamathela esandleni, ngokunethezeka ehlobo elishisayo.
Ukumelana namanzi ikakhulu kuya ngokuthi amanzi azophenduka amaconsi amanzi kulendwangu. Kepha kukhona iphuzu, ukumelana kwamanzi nokungena komoya kulandelana. Ngokuvamile, izindwangu ezingena kahle komoya ziyamelana namanzi, njengalezo ezingangeneki, njengezindwangu ezigoqwe nge-vinyl noma ezinamathiselwe. Ukungenwa ngamanzi kubaluleke kakhulu ekushumeni i-awning, okokugqoka okungangeni manzi nasekuhlobiseni ingaphakathi le-yacht
Ukugqoka ukumelana kusho ikhono lendwangu ukumelana nokugqoka ngaphansi kokungezwani. Izindwangu ezisetshenziselwa umkhumbi nokusetshenziswa kwangaphandle zivame ukusinda, ziqine futhi zivame ukufakwa i-vinyl noma ezinye izinhlaka. Lokhu ikakhulukazi ukufeza ukubukeka okuthambile nokuzizwa, nokwenza ngcono ukumelana nokugqoka.
Ukumelana ne-UV mhlawumbe kuyinto ebaluleke kakhulu futhi elula kunazo zonke ezindwangu zangaphandle. Ukuphakama kokumelana ne-UV, isikhathi eside sempilo yesevisi yendwangu elangeni. Izindwangu eziningi zokukhanya kwelanga zibaluleke kakhulu kunalezo zomthunzi.
Ukuphakama kombala wendwangu, kungenzeka ukuthi iphethini izophela. Ukushesha kombala kwendwangu kuya ngekhono layo lokugcina umbala isikhathi eside ekukhanyeni kwelanga, imvula neqhwa. Ukushesha kombala kungaphezulu kwesici sobuhle. Kodwa-ke, uma kusetshenziswa imibala ekhanyayo yama-awning, amakhava, amata, njll., Ukushesha kombala kufanele kubhekwe. Uma indwangu izosetshenziswa ngobuningi noma ivezwe ngaphandle isikhathi eside, indwangu enephethini ephrintiwe ingaphela ngokuhamba kwesikhathi.
Uma kuqhathaniswa nezindwangu zasendlini, ukuhlanzeka kwezindwangu zangaphandle kubonakala kungabalulekile kangako. Kepha ngezindwangu zangaphandle, inhlanzeko izothinta impilo yayo yesevisi. Inhlanzeko empeleni iwukususa ukungcola kwendwangu.
Uma ingahlanzwa, isikhunta sizohlala phezu kwendwangu futhi siqhubeke sikhula odakeni. Njengaleyo ndwangu eboshwe ngohlangothi olulodwa ayihlanzekile kakhulu, ngakho-ke lolu hlobo lwendwangu kufanele lubhekele ngokukhethekile abanye.